नेपाल आज | यौन विश्लेषक मदन राईकाे खुलासाः महिलाले मलाई बलत्कार प्रयास गरे, तर... (भिडियो)
यौन-शिक्षा समाज भिडियो कभर स्टोरी
नियमित सेक्स गरेरै म यति स्मार्ट भएँ
शुक्रबार, ०४ जेठ २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज (RP)
मदन राई मूलतः कृषिविज्ञ हुन् । खोटाङमा जन्मे–हुर्केका राईले कृषि र शिक्षाको क्षेत्रमा देशमै उदाहरणीय काम गरेका छन् ।
कुनै बेला कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय राई पछिल्लो समय नयाँ शक्ति नेपालमा आवद्ध छन् । समाजशाष्त्र, राजनीति, दर्शन लगायत विषयबारे खास रुची राख्ने राई यौन शिक्षाको बारेमा खुलेर बोल्छन् ।
पछिल्लो समय नेपालमा बलात्कारका घटना किन बढे ? किन हुन्छ बलात्कार ? यस्तो किसिमको अपराध कसरी रोक्ने भन्ने जस्ता विषयमा राईले समाजशाष्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टिले ब्याख्या गरेका छन् । नेपालआजले राईसँग लिएको अन्तरवार्ताको अंश यहाँ उतारिएको छ ः
बलत्कार बढेको हैन, चेत खुलेको हो
बलत्कारका घटना बढ्नु निकै दुखद् कुरा हो । तर यस्ता घटना आजमात्र बढेका हैनन् । पहिले देखि नै बलात्कारका घटना हुन्थे । समाजमा चेत बढी खुलेको र कानूनले पनि परिभाषित गर्दै लगेर दण्डनीय विषय रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि यस्ता घटना सार्वजनिक हुन थालेका हुन् ।
बलात्कारका घटना किन हुन्छन् ?
प्रकृतिको बनावटले हाम्रो शरीर नारी र पुरुषको छ । पुरुष र नारी अलग हुनुको अर्थ उनीहरूको बनावट नै अलग छ । विशेष गरेर सबै यौगिक नै हो । नारी र पुरुषमा लिंग र योनिकै आधारमा फरक छुट्याइन्छ । विभिन्न फरक तत्वले ती बन्छन् । नारीमा बढी स्ट्रोजेन भन्ने हर्मन हुन्छ । पुरुषमा टेस्टेस्टोरन । ती दुई हर्मनले उमेर पुगेपछि मानिसमा बढी भोक जगाउँछ । १२ वर्ष पुगेपछि भोक जाग्छ । धेरैजस्तो बलत्कार भन्ने केश चाहिँ केटाले नै केटीलाई बढी प्रयास गरेको हुन्छ । पुरुषमा त्यो भोक जागेपछि उसले विर्य स्खलन गर्ने माध्यम खोज्छ । यसरी चेत नखुल्नाले दुर्घटनास्वरुप महिलालाई बलत्कार गर्न पुग्छ । त्यसैले बलत्कार योजना होइन, दुर्घटना नै हो ।
दुबैमा हुन्छ यौन चाहना
यौन चाहना भोक जागेपछि मात्र हुने होे । जस्तो कि १२ वर्षदेखि महिला पुरुषमा त्यो भोक सुरु हुन्छ । विशेषगरी महिलामा रजश्वाला सुरु भएपछि यौन चाहना बढ्दछ । तर महिलाको रजश्वाला बन्द भएपछि भने उनीहरूमा यौन चाहना हुँदैन । तर पुरुषमा भने सदाबहार यौन चाहना रहन सक्छ । यदी पुरुषमा महिलामा पनि स्ट्रोजेन र टेस्ट्रेस्टोरेन को कमी छ भने यौन चाहना नहुन पनि सक्छ । त्यस्तो महिला वा पुरुषले विवाह गर्न चाहँदैनन् । यदी विवाह भइहालेमा पनि वैवाहिक जीवन सुखद् हुन सक्दैन । त्यसले सम्बन्धमा ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ । त्यसैले मागी विवाह गर्दा पछि यस्ता समस्याले सम्बन्ध बिग्रने गरेको समाजमा धेरै घटना छन् ।
यौनशिक्षा नै प्रमुख कुरा
पहिलो कुरा त जसले बलत्कार गर्छ उसैलाई शिक्षाको आवश्यक छ । बलात्कृत हुनेले जोेगिन कठिन छ । प्रायः बलात्कृत हुने भनेको केही नजान्ने अबोध बालकहरू हुन्छन् । यदी उमेर पुगेका बुझेका छन् भने त प्रतिकार गर्न सक्छन् । कानूनले बलात्कारलाई कहिल्यै कम गर्न सक्दैन । किनकी यदी कानून तगडा भयो भने महिला र पुरुषहरू सँगै हिँड्ने र सँगै एउटै अफिसमा काम गर्ने वातावरण नै हुँदैन । यदी रिसइबी भयो गल्ती नै नगरीकन पनि पुरुषहरू आरोपित हुन सक्छन् । त्यसैले सकेसम्म त यस विषयमा ज्ञान नै दिनु ठुलो कुरा हो । मानिसहरू यस विषयमा जति सचेत हुँदै गयो उति नै घटनाहरू कम हुँदै जाने हो । यौनसम्बन्धी ज्ञान नै घटना न्यूनिकरणको प्रमुख आधार हो ।
नेपालमा भने यौनशिक्षाको अभाव छ । युरोपियन देशहरूमा भने सानैदेखि यौनशिक्षा दिने गरिन्छ । त्यो राम्रो कुरा पनि हो । तर नेपालमा पनि प्राचिनकाल देखि मन्दिर टुँडालहरूमा यौनका कलात्मक चित्रहरू कोरिएको हुन्छ । शिव मन्दिरमा शिवलिंग राखिएको हुन्छ । त्यसको मतलब यौन आवश्यक कुरा हो । यसलाई हामीले स्वीकार गर्न नसक्नु शिक्षाको कमी हुनु नै हो ।
नियमित सेक्स गर्नाले स्वस्थ भएँ
सेक्सले रक्तसञ्चार हुन्छ । जब पुरुषमा यौनको चाहना हुन्छ तब लिंग ठूलो भएर आउँछ । कारण, सबै शरीरभरीको रगत त्यहाँ गएर भरिन्छ । महिलाहरूको योनी पनि फुलेर नरम भएर आउँछ । किनकी त्यहाँ रक्तसञ्चार भएको हुन्छ । यौनक्रिडा गरेपछि मानिसले स्वर्गीय आनन्द प्राप्त गर्दछ । म पनि त्यही आनन्द प्राप्त गर्छु । नियमित सेक्सले नै मलाई यति स्वस्थ र स्मार्ट बनाएको हो ।
सेक्स गर्नु कुनै अपराध होइन । तर यदी आफुलाई सेक्स गर्न मन छ । तर आफ्नो पार्टनरलाई मन छैन भने त्यस बेलामा उनलाई मन नलाग्दा नलाग्दै जबरजस्ती सेक्स गर्नु चाहिँ अपराध हो ।
मदन रार्इ याैन शिक्षा बलात्कार